धर्म र धर्मनिरपेक्षता – | Nepaliasmita:: For Latest Nepal news and updates
——- शरच्चन्द्र वस्ती
धर्म नबुझेकाहरूले धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरे भनेर खुनखुन गर्नुको कुनै तुक छैन, किन भने धर्म बुझ्नेले यस्तो घोषणा कहिल्यै गर्दै गर्दैन । यो धर्मको मर्म नबुझेकाहरूले नै गर्ने कुरा हो । अनि, तिनले जनताप्रति विश्वासघात गरे भनेर पो किन चित्त दुखाउनु ? किन भने विश्वासघात पनि त ‘धर्मनिरपेक्षता’ कै एउटा पाटो हो । धर्म नछोड्नेले पो विश्वासघात गर्दैन ! (पहिलोपटक प्रकाशित ‘यो साता’ २०६६ चैत ६–१२, शुक्रवार // यहाँ ,लेखक वस्तीको फेसबुकबाट साभार)